पत्रकार धमला आफैंले ‘ऋषि धमला जिन्दाबाद’ भन्दै नारा लगाउन लगाएपछि बने ट्रोलको शिकार! (भिडिओ) – Gandaki Chhadke
पत्रकार धमला आफैंले ‘ऋषि धमला जिन्दाबाद’ भन्दै नारा लगाउन लगाएपछि बने ट्रोलको शिकार! (भिडिओ)
नेपालका चर्चित र विवादमा आइरहने पत्रकार हुन् ऋषि धमला। उनी हाल रिपोर्टर्स नेपाल डटकम अनलाईन, प्राइम टेलिभिजनजस्ता संचारमाध्यममा आवद्ध छन्। उनलाई एटेन्सन सिकर पत्रकार भनेर चिन्ने गरिन्छ।
धेरैले उनी टेलिभिजनको क्यामेरा देखिनासाथ त्यहीँ अगाडि उभिने पत्रकार भन्दछन्। यद्यपी उनले देशका उच्च सबै नेतालाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गराउन सक्छन् र तिखो तिखो–सान्दर्भिक प्रश्न गर्न सक्दछन् जसको सबैले प्रशंका गर्नैपर्र्छ। हालै एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो।
सो क्रममा प्राइम टेलिभिजन र रिपोटर्स नेपाल अनलाईनले ‘ऋषि धमला एमाले महाधिवेशनमा पनि चर्चित’ भनेर समाचारहरु आए जुन आवश्यक थिएन। पत्रकारलाई देवत्वकरण गरिनु उचित होइन। संचारमाध्यमले त समय सान्दर्भिक समाचार दिने हो। यस बीचमा ‘ऋषि धमला जिन्दावाद’ भनेको भिडिओहरु भाइरल भएका थिए।
तर उनी आफैंले ‘ऋषि धमला जिन्दावाद’ भन्न लगाएका रहेछन्। अहिले उनले त्यसो भन्न सिकाएको भिडिओ बाहिरिएपछि उनी ट्रोलको शिकार बनेका छन्।सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले उनलाई ‘जोकर पत्रकार’ भनिरहेका छन्। ऋषि धमला आफैं चर्चित व्यक्ति हुन्। यस्तो कार्य गरेर आफ्नो इज्जत दाउमा नलगाउन सबैले सुझाव दिएका छन्। भिडिओ
जितको खुशीयाली मनाउँदा मनाउँदै प्रशिक्षकको मृ’त्यु